कुन बिन्दुमा बच्चाहरूमा भाषण ढिलाइ हुन सक्छ? | बेजिया
कुन बिन्दुमा बच्चाहरूमा भाषण ढिलाइ हुन सक्छ?
मारिया जोस रोल्डन | 04/06/2022 13:28 | बेबस
आमाबाबुको लागि सबैभन्दा प्रत्याशित क्षणहरू मध्ये एक हो जब बच्चा उसले बडबड गर्न र आफ्नो पहिलो शब्द भन्न सक्षम छ। जे होस्, प्रत्येक बच्चा फरक छ र त्यहाँ केहि हुनेछन् जो बोल्न को लागी अधिक पूर्ववर्ती हुन्छन् र कोही जो को लागी कठिन समय छ। तुलना गर्नु आमाबाबुले गर्ने सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो, विशेष गरी जब यो भाषा विकासको कुरा आउँछ।
बोलीको विषयलाई लिएर अल्झाउनु हुँदैन र यस्तो समय नआएसम्म धैर्य गर। अर्को लेखमा हामी तपाईंलाई बच्चाले कहिले बोल्न थाल्छ र कति समयमा भाषणमा ढिलाइ हुन सक्छ।
1 सबै बच्चाहरू फरक हुन्छन्
2 कुन बिन्दुमा त्यहाँ भाषा ढिलाइ हुन सक्छ?
3 भाषा विकासमा बच्चालाई कसरी मद्दत गर्ने
सबै बच्चाहरू फरक हुन्छन्
जब यो भाषा विकासको कुरा आउँछ, यो भन्नु पर्छ कि प्रत्येक बच्चा फरक छ र बोल्दा उनीहरूको आफ्नै लय चाहिन्छ। बोलीमा ढिलाइ हुन्छ जब भनिन्छ भाषाको विकास बच्चाको उमेरसँग मेल खाँदैन।
सामान्य रूपमा, यो भन्न सकिन्छ कि बच्चाले आफ्नो पहिलो शब्दहरू एक वर्षको उमेरबाट भन्न थाल्छ। 18 महिनाको उमेरमा बच्चाको शब्दावलीमा लगभग 100 शब्दहरू हुनुपर्दछ र दुई वर्षको उमेरमा उनको शब्दावली लगभग 600 शब्दहरूले विस्तार गर्नुपर्छ।3वर्षको उमेरमा, तिनीहरूले तीन तत्वहरू र लगभग 1500 शब्दहरू भएका वाक्यहरू बनाउनु पर्छ।
कुन बिन्दुमा त्यहाँ भाषा ढिलाइ हुन सक्छ?
दुई वर्षको उमेरमा केही भाषा समस्या हुन सक्छ दुई शब्दहरु संग वाक्य बनाउन असमर्थ छ। त्यहाँ धेरै लक्षणहरू छन् जसले संकेत गर्न सक्छ कि भाषणमा केही ढिलाइ भएको छ, विशेष गरी जब उहाँ3वर्षको हुनुहुन्छ:
वाक्य बनाउन सकिएन पृथक आवाज मात्र बोल्छ।
यसले कुनै पनि प्रकारको प्रस्ताव वा लिङ्क प्रयोग गर्दैन र फोनोलोजिकल सरलीकरणको लागि रोज्नुहोस्।
उहाँ आफैंमा वाक्यहरू सिर्जना गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ र उसले गरेको नक्कलको कारण हो।
ढिलो बोल्न सुरु गर्ने अधिकांश बच्चाहरू, उनीहरूले वर्षौंदेखि आफ्नो भाषालाई सामान्य बनाउन खोज्छन्।
भाषा विकासमा बच्चालाई कसरी मद्दत गर्ने
आमाबाबुले कथाहरू पढ्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ ताकि बच्चा बिस्तारै भाषासँग परिचित हुन जान्छ।
बच्चाको उमेर र अनुकूल हुने सरल वाक्यहरू तयार गर्नुहोस् तिनीहरूलाई दैनिक आधारमा प्रयोग गर्नुहोस्।
जहिले पनि नाम राख्नु राम्रो हो गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यहरू।
लगातार दोहोर्याउनुहोस् र दिनमा धेरै पटक दैनिक शब्दहरू जस्तै घर, ओछ्यान, पानी, आदि।
बच्चासँग सम्बन्धित केही खेलहरू खेल्नुहोस् भाषा वा बोली संग।
छोटो, बच्चाहरु र बच्चाहरु को बोली मा एक निश्चित ढिलाइ को बारे मा धेरै चिन्ता को आवश्यकता छैन। प्रत्येक बच्चालाई आफ्नै ताल चाहिन्छ र अरू सानाहरूसँग तुलना गर्नु राम्रो होइन। यदि, वर्षौंको बावजुद, बच्चालाई बोल्न केही कठिनाइ छ भने, भाषाको विकासमा सीधा हस्तक्षेप गर्न सक्ने कुनै पनि समस्यालाई इन्कार गर्न विशेषज्ञकहाँ जानु राम्रो विचार हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मद्रेस » बेबस » कुन बिन्दुमा बच्चाहरूमा भाषण ढिलाइ हुन सक्छ?
अव्यवस्थित घरमा बस्दा तपाईको स्वास्थ्यलाई कसरी असर गर्छ
ब्रोकोली र दहीको साथ चटनीमा मसालेदार मीटबलहरू